को’रोना खोपबारे अमेरिकाले दियो अत्यन्तै खुशीको खबर !! अबको १ महिनामा खोप आइसक्ने ! – Dainik Sangalo
October 27, 2020 203
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र सरुवा रो’ग विशेषज्ञ एन्थोनी फाउचीले नोभेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा को’रोनाको खोप तयार भइसक्ने संकेत दिएका छन्। बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिस ट्रस्टका प्रमुखले पनि डिसेम्बरको आरम्भसम्ममा खोप तयार हुन सक्ने बताएका छन्। बेलायतमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई को’रोना खोप दिने योजना बनेको छ । क्रिसमसअघि हेल्थकेयर वर्करहरूलाई खोप दिन सकिनेछ।
अमेरिकाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाको खोप तयार पार्न एक अर्ब डलर दिएको छ र आफ्ना लागि ४० करोड डोज सुरक्षित पारेको छ । बेलायत सरकारले पनि १० करोड डोजको अर्डर गरिसकेको छ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
फाउचीले नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा कोरो’ना खोप प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने थाहा भइसक्ने बताए । यो सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको पुष्टि भएपछि आवश्यकता परेका मानिसलाई खोप दिने अर्को चुनौती भएको उनले बताए।
तर डिसेम्बरमा खोप सफल भएको घोषणा भएछ भने पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई खोप दिनका लागि डोज नपुग्ने उनले बताए । अमेरिकामा मानिसहरूले सन् २०२१ को लगभग मध्यसम्म को’रोना खोपका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
Prevबडादसैंको दिन आज भएको सडक दु’र्घटनामा २ जनाको मृ’त्यु
Nextहेलिकोप्टरमार्फत सुत्केरीको उद्धार, शिशुको मृत्यु